သီးသန့်လုံခြုံရေး / သတ်မှတ်ချက်များ |
နေအိမ် » သီးသန့်လုံခြုံရေး / သတ်မှတ်ချက်များ
အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများ coronationcasino.com website နှင့်အားလုံးအကြောင်းအရာအားလုံးအသုံးအုပ်ချုပ်, ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာသို့မဟုတ်တဆင့်ရရှိနိုင်ပါဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ (အတူတူယူ, အကျဘျဆိုကျ). အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်မှ Coronation ကာစီနိုကပိုင်ဆိုင်နှင့် operated ဖြစ်ပါတယ် - GlobaliGaming (& quote; မှ Coronation ကာစီနို & quotes,). အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ဤနေရာတွင်ပါရှိသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေား၏အားလုံးအပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြား operating စည်းမျဉ်းများပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲသင့်ရဲ့လက်ခံမှုမှဘာသာရပ်ပူဇော်သော, မူဝါဒတွေ (အပါအဝင်, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, မှ Coronation ကာစီနိုရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ) မှ Coronation ကာစီနိုဖွငျ့ဤဆိုက်ကိုအပေါ်အခြိနျမှနျမှထုတ်ဝေသောမည်အကြောင်းနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (စုပေါင်းလျက်, ထို & quotes; သဘောတူညီချက် & quotes,).
ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်အသုံးမပြုမီဤသဘောတူညီဂရုတစိုက်ဖတ် ကျေးဇူးပြု.. ဝဘ်ဆိုက်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုရယူသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်, သင်ဤသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေားဖွငျ့မှတ်တိုင်ဖြစ်လာမှသဘောတူ. သင်ဤသဘောတူညီချက်၏အပေါငျးတို့သသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများသဘောမတူဘူးဆိုရငျ, ထို့နောက်သင်ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုဝင်ရောက်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမသုံးစေခြင်းငှါ. ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုမှ Coronation ကာစီနိုကကမ်းလှမ်းမှုကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, လက်ခံမှုကိုဖော်ပြဤဝေါဟာရများမှကန့်သတ်ထားသည်. အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်မှသာအနည်းဆုံးနေသောလူတစ်ဦးချင်းစီမှရရှိနိုင် 18 အသက်အနှစ်.
သင့်ရဲ့ coronationcasino.com အကောင့်များနှင့်ဆိုက်. သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဘလော့ဂ် / site ကိုဖန်တီးခဲ့လျှင်, သင်သင့်အကောင့်၏လုံခြုံရေးနှင့်ဘလော့ဂ်ထိန်းသိမ်းခြင်းတာဝန်ရှိသည်, သင်အကောင့်အောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်သမျှသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဘလော့နှင့် ဆက်စပ်. ယူအခြားမည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အပြည့်အဝတာဝန်ရှိသည်. သင်တစ်ဦးအထင်မြင်မှားစေသောသို့မဟုတ်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောထုံးစံ၌သင့် Blog မှသော့ချက်စာလုံးများကိုဖော်ပြရန်သို့မဟုတ် assign မပြုရ, တခြားသူတွေရဲ့အမည်သို့မဟုတ်ဂုဏ်သတင်းအပေါ်ကုန်သွယ်မှုရန်ရည်ရွယ်နေတဲ့ထုံးစံ၌အပါအဝင်, နှင့်မှ Coronation ကာစီနိုကမသင့်လျော်သောသို့မဟုတ်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောစဉ်းစားဆိုဖော်ပြချက်သို့မဟုတ် keyword ကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်စေခြင်းငှါ, မှ Coronation ကာစီနိုတာဝန်ယူမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဖွယ်ရှိ. သငျသညျခကျြခငျြးသင့်ရဲ့ Blog ကိုမဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုမှုမှ Coronation ကာစီနိုကိုအကြောင်းကြားရမယ်, သင့်အကောင့်သို့မဟုတ်လုံခြုံရေးကိုမဆိုအခြားပြိုပျက်ရာတို့ကို. မှ Coronation ကာစီနိုကိုသင်အားဖြင့်မည်သည့်လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှုအတွက်ထိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်၏ရလဒ်အဖြစ်မြှုတ်ဆိုမျိုးကိုမဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအပါအဝင်.
မျှဝေသူများ၏တာဝန်ယူမှု. သင်တစ်ဦးဘလော့လုပ်ကိုင်လိုလျှင်, ဘလော့ဂ်ပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်, ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှပစ္စည်းကို post, Website တွင်ဖော်ပြပို့စ်လင့်များ, သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်လုပ် (သို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီလုပ်ခွင့်ပြု) အကျဘျဆိုကျအားဖွငျ့ရရှိနိုငျပစ္စည်းကို (မည်သည့်ထိုကဲ့သို့ပစ္စည်းကို, & quote; အကြောင်းအရာ & quotes,), သငျသညျများ၏ content များအတွက်လုံးဝတာဝန်ရှိသည်, ကနေရရှိလာတဲ့နှင့်မည်သည့်ထိခိုက်မှု, ကအကြောင်းအရာ. ဒါကမခွဲခြားဘဲမေးခွန်းအတွက်အကြောင်းအရာကစာသားဖွဲ့စည်းရှိမရှိ၏ဖြစ်ရပ်သည်, ဂရပ်ဖစ်, တစ်ဦးအသံဖိုင်, သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲ. အကြောင်းအရာရရှိနိုင်အောင်အားဖြင့်, သငျသညျကကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ခိုင်လုံ:
အဒေါင်းလုတ်ဆွဲ, ထိုအကြောင်းအရာ၏ကူးယူနှင့်အသုံးပြုမှုကိုစီးပွားဖြစ်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မည်မဟုတ်, မူပိုင်ခွင့်ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမ, ပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်အခွင့်အရေးများ, မည်သည့်တတိယပါတီ၏;
သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုမှလူ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်လျှင်သင်ဖန်တီး, သငျသညျတစ်ခုခုကိုများ (ကိုယ့်) ထိုအကြောင်းအရာ post သို့မဟုတ်ရရှိနိုင်စေရန်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ထံမှခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိ, မည်သည့် software ကိုကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမ, သို့မဟုတ် (ii) ထိုအကြောင်းအရာတွင်သို့မဟုတ်ဖို့အားလုံးကိုအခွင့်အရေးအဖြစ်ကိုသင့်အလုပ်ရှင်တစ်ဦးပယ်ဖျက်ပေးခြင်းသည်မှလုံခြုံ;
သငျသညျအပြည့်အဝအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းဆို Third-party လိုင်စင်နှင့်အတူလိုက်နာကြပါပြီ, အောင်မြင်စွာအသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်လိုအပ်သောစည်းကမ်းချက်များကိုအဆုံးသတ်ရန်ရှောက်သွားလိုအပ်သောခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြုမိပါပြီ;
ထိုအကြောင်းအရာမဆို virus များဆံ့သို့မဟုတ် install လုပ်မထားဘူး, ပိုးကောင်များ, ကို malware, Trojan တွေမြင်းများသို့မဟုတ်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အဖျက်အကြောင်းအရာ;
ထိုအကြောင်းအရာက spam မဟုတ်ပါဘူး, စက်မဟုတ်ပါဘူး- သို့မဟုတ်ကျပန်း-generated, နှင့်တတိယပါတီဆိုဒ်များမှ traffic ကိုမောင်းထုတ်သို့မဟုတ်တတိယပါတီဆိုဒ်များ၏ search engine ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ဖို့ဒီဇိုင်းသိက္ခာမဲ့သို့မဟုတ်မလိုချင်တဲ့စီးပွားဖြစ်အကြောင်းအရာဆံ့မပါဘူး, သို့မဟုတ်နောက်ထပ်ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များအား (ထိုကဲ့သို့သော phishing အဖြစ်) ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းများ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်လက်ခံသူများလှည့်ဖြား (ထိုကဲ့သို့သော spoofing အဖြစ်);
ထိုအကြောင်းအရာညစ်ညမ်းမဟုတ်ပါဘူး, ခြိမ်းခြောက်မှုများဆံ့သို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းဆီသို့ဦးတည်အကြမ်းဖက်မှုများလှုံ့ဆော်ပါဘူး, နှင့်မည်သည့်တတိယပါတီတွေရဲ့ privacy သို့မဟုတ်လူသိရှင်ကြားလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မပါဘူး;
သင့်ရဲ့ Blog ကိုဒီလိုကျွှန်တော်တို့အပေါ် spam များကိုလင့်များအဖြစ်မလိုချင်တဲ့အီလက်ထရောနစ်မက်ဆေ့ခ်ျများမှတဆင့်ကြော်ငြာတဲ့မပါ, အီးမေးလ်စာရင်းများ, အခြားဘလော့ဂ်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ, နှင့်အလားတူမလိုလားသောမြှင့်တင်ရေးနည်းလမ်းများ;
သင့်ရဲ့ Blog ကိုသင်သည်အခြားလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားသင့်စာဖတ်သူတွေလှည့်ဖြားစေတဲ့ထုံးစံ၌အမည်ရှိသည်မဟုတ်. ဥပမာ, သင့်ရဲ့ Blog ကိုရဲ့ URL သို့မဟုတ်နာမတော်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အမည်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထက်အခြားကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါဘူး; နှင့်
သင်မှာ .... ရှိသည်, ကွန်ပျူတာ code ကိုပါဝင်သောအကြောင်းအရာ၏အမှု၌, တိကျစွာခွဲခြားနှင့် / သို့မဟုတ်အမျိုးအစားကိုဖော်ပြခဲ့, သဘာဝ, ထိုပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, မှ Coronation ကာစီနိုအားဖြင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့မေတ္တာရပ်ခံရှိမရှိသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်.
သင့်ရဲ့ Website တွင်ပါဝင်ဘို့မှ Coronation ကာစီနိုမှအကြောင်းအရာတင်ပြခြင်းအားဖြင့်, သငျသညျမှ Coronation ကာစီနိုဟာကမ္ဘာ့ကျယ်ပြန့်ပေးသနားတော်မူ, မူပိုင်-အခမဲ့, နှင့် Non-သီးသန့်လိုင်စင်မျိုးပွားရန်, ပြုပြင်မွမ်းမံ, တစ်ခုတည်းကိုသာပြသ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အကြောင်းအရာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်ထုတ်ဝေ, သင့်ရဲ့ Blog ကိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်. သငျသညျအကြောင်းအရာဖျက်မယ်ဆိုရင်, မှ Coronation ကာစီနိုထို Website မှဖယ်ရှားပစ်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အားထုတ်မှုကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့သင်အကြောင်းအရာမှယာယီသိမ်းဆည်းသို့မဟုတ်ကိုးကားချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါစေမစေခြင်းငှါဝန်ခံ.
သူတို့အားကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်အာမခံမဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, မှ Coronation ကာစီနိုခွင့်ရှိသည် (မတာဝန်သော်လည်း) သို့, မှ Coronation ကာစီနိုရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိရှိ (ကိုယ့်) ဆိုအကြောင်းအရာငြင်းဆန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှား, မှ Coronation ကာစီနိုရဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အမြင်တွင်, ဆိုမှ Coronation ကာစီနိုမူဝါဒကိုချိုးဖောက်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်ကန့်ကွက်မည်သည့်လမ်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ် (ii) ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာတစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအားကျဘျဆိုကျ၏အသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ငွငျးပယျ, မှ Coronation ကာစီနိုရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိရှိ. မှ Coronation ကာစီနိုယခင်ကပေးဆောင်မည်သည့်ပမာဏသာ၏တစ်ဦးငွေပြန်အမ်းပေးရန်မတာဝန်ရှိသည်လိမ့်မယ်.
တစ်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်, သငျသညျမှ Coronation ကာစီနိုတ-အချိန်နှင့် / သို့မဟုတ်ညွှန်ပြလစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းအခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့သဘောတူ (အပိုဆောင်းငွေပေးချေမှုဝေါဟာရများအခြားဆက်သွယ်ရေးတွင်ထည့်သွင်းစေခြင်းငှါ). subscription ငွေပေးချေမှုကိုသင်တစ်ဦး Upgrade တက်သည်လက်မှတ်ထိုးနေ့၌တစ်ဦး Pre-လစာအခြေခံပေါ်မှာတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ပြီးညွှန်ပြအဖြစ်လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းကာလသည်ဝန်ဆောင်မှု၏အသုံးပြုမှုကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်. ငွေပေးချေမှုသည်အမ်းမဟုတ်.
သင်တစ်ဦး subscription ကိုဖျက်သိမ်းချင်သောသက်ဆိုင်သောကြေးပေးသွင်းကာလမကုန်မီမှ Coronation ကာစီနိုအကြောင်းကြားမဟုတ်လျှင်, သင့်ရဲ့ကြေးပေးသွင်းကိုအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်နှငျ့သငျထိုကဲ့သို့သောစာရင်းပေးသွင်းခြင်းအတွက်ထို့နောက်-သက်ဆိုင်သောနှစ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းကြေးစုဆောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုရန် (အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မည်သည့်အခွန်များ) သင်တို့အဘို့အစံချိန်အပေါ်မည်သည့်ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ငါတို့သည်အခြားပေးချေမှုယန္တရားကို အသုံးပြု.. အဆင့်မြှင့်အရေးအသားထဲမှာမှ Coronation ကာစီနိုရန်သင့်တောင်းဆိုချက်တင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်.
အဖိုးအခ; ငွေပေးချေမှုရမည့်. တစ်န်ဆောင်မှုများအကောင့်တက်သည်လက်မှတ်ထိုးခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုမှ Coronation ကာစီနိုထိုသက်ဆိုင်သော setup ကိုအခကြေးငွေနှင့်ထပ်တလဲလဲအခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့သဘောတူ. သက်ဆိုင်အခကြေးငွေကိုသင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုထူထောင်ကြသည် နေ့မှစ. နှင့်ထိုကဲ့သို့သောန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြု၏ကြိုတင်မဲအတွက်စတင်ပြီးသို့ပို့လိမ့်မည်. မှ Coronation ကာစီနိုသုံးဆယ်ပေါ်မှာငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အဖိုးအခကိုပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည် (30) သငျသညျရက်အတွင်းကြိုတင်ရေးထားလျက်ရှိ၏အသိပေးစာ. န်ဆောင်မှုများသုံးဆယ်အပေါ်အချိန်မရွေးသင်တို့အနားမှာဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ် (30) မှ Coronation ကာစီနိုမှအကြောင်းကြားစာကျမ်းစာ၌ရေးထားရက်ပတ်လုံး.
ထောက်ပံ့. သင်၏ဝန်ဆောင်မှုဦးစားပေးအီးမေးလ်ကိုပံ့ပိုးကူညီမှုမှဝင်ရောက်ခွင့်လည်းပါဝင်သည် အကယ်.. & quote; အီးမေးလ်ထောက်ခံမှု" မည်သည့်အချိန်တွင်အီးမေးလ်ဖြင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့အကူအညီအတွက်တောင်းဆိုမှုများကိုလုပ်နိုင်စွမ်းကိုဆိုလိုသည် (တဦးတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ကအတွင်းတုံ့ပြန်ရန်မှ Coronation ကာစီနိုအားဖြင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အားထုတ်မှုနှင့်အတူ) ထို VIP န်ဆောင်မှုများ၏အသုံးပြုမှုကိုရည်မှတ်. & quotes, ဦးစားပေး" ထောက်ခံမှုစံသို့မဟုတ်အခမဲ့ coronationcasino.com န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုသူများအတွက်ထောက်ခံမှုကျော်ဦးစားပေးကြာသည်ဟုဆိုလိုသည်. အားလုံးထောက်ခံမှုမှ Coronation ကာစီနိုစံန်ဆောင်မှုအလေ့အကျင့်များနှင့်အညီထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်, လုပျထုံးလုပျနညျးနှင့်မူဝါဒများကို.
ဝက်ဘ်ဆိုက်လာရောက်လည်ပတ်သူများ၏တာဝန်ယူမှု. မှ Coronation ကာစီနိုပြန်လည်သုံးသပ်မမူ, နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မနိုင်, ပစ္စည်း၏အားလုံး, ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်, ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှ posted, ထို့ကြောင့်ကပစ္စည်းကိုရဲ့ content များအတွက်တာဝန်ရှိမဖွစျနိုငျ, အသုံးသို့မဟုတ်သက်ရောက်မှုများ. ထိုဝက်ဘ်ဆိုက် operating ခြင်းအားဖြင့်, မှ Coronation ကာစီနိုက posted ရှိပစ္စည်းထောက်ခံကြောင်းကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်ဆိုလိုပါဘူး, သို့မဟုတ်ပါကတိကျမှန်ကန်သောဖြစ်တို့အားဤသို့သောပစ္စည်းကိုယုံကြည်သောသူ, အသုံးဝင်သောသို့မဟုတ် Non-အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်. သငျသညျဗိုင်းရပ်စ်ကနေကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည့်အဖြစ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုယူတာဝန်ရှိသည်, ပိုးကောင်များ, Trojan တွေမြင်းများ, နှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အဖျက်အကြောင်းအရာ. အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ထိုးစစ်ကြောင်းအကြောင်းအရာဆံ့စေခြင်းငှါ, ညစ်ညမ်းသော, သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်တားမြစ်ခံရ, အဖြစ်ကောင်းစွာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်, အပွငျအဆငျအမှားတွေ, နှင့်အခြားအမှားများ. အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်းသီးသန့်တည်ရှိမှုသို့မဟုတ်လူသိရှင်ကြားလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ကြောင်းပစ္စည်းကိုမဆံ့စေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်ပညာတတ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးများအားချိုးဖောက်, တတိယပါတီ, ဒါမှမဟုတ်ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ, အပိုဆောင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများဘာသာရပ်ဖြစ်သည့်၏ကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း, ဖော်ပြထားသို့မဟုတ်မထားသော. မှ Coronation ကာစီနိုထိုဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဧည့်သည်များအားဖြင့်အသုံးမှရရှိလာတဲ့ဆိုထိခိုက်မှုများအတွက်မဆိုတာဝန်မယူ, သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာသူတို့အားဧည့်သည်များအားဖြင့်ဆိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲမှရှိ posted.
အခြား Website များအပေါ် Posted အကြောင်းအရာ. ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကြပြီမဟုတ်, နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မနိုင်, ပစ္စည်း၏အားလုံး, ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်, သောလင့်များ coronationcasino.com ဖို့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကတဆင့်ရရှိနိုင်လုပ်, နှင့် coronationcasino.com လင့်ထားသော. မှ Coronation ကာစီနိုသူတို့အား Non-မှ Coronation ကာစီနိုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကျော်မဆိုထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ပါဘူး, နှင့်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုအတွက်တာဝန်မယူ. non-မှ Coronation ကာစီနိုဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာမှချိတ်ဆက်အားဖြင့်, မှ Coronation ကာစီနိုထိုသို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာထောက်ခံကြောင်းကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်ဆိုလိုပါဘူး. သငျသညျဗိုင်းရပ်စ်ကနေကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည့်အဖြစ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုယူတာဝန်ရှိသည်, ပိုးကောင်များ, Trojan တွေမြင်းများ, နှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အဖျက်အကြောင်းအရာ. မှ Coronation ကာစီနိုသည် non-မှ Coronation ကာစီနိုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေသင့်ရဲ့အသုံးမှရရှိလာတဲ့ဆိုထိခိုက်မှုများအတွက်မဆိုတာဝန်မယူ.
မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုနှင့် DMCA ပေါ်လစီ. မှ Coronation ကာစီနိုက၎င်း၏အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုလေးစားလိုက်နာဖို့တခြားသူတွေမေးတယ်အဖြစ်, ဒါကြောင့်တခြားသူတွေရဲ့ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုလေးစား. သငျသညျ coronationcasino.com အားဖြင့်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးသို့မဟုတ်ဆက်စပ်မှုကပစ္စည်းကိုသင့်ရဲ့မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်သည်ဟုယုံကြည်လျှင်, သငျသညျမှ Coronation ကာစီနိုရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေနှင့်အညီမှ Coronation ကာစီနိုအကြောင်းကြားရန်အားပေးတိုက်တွန်းကြသည် (& quote; DMCA & quotes,) ပေါ်လစီ. မှ Coronation ကာစီနိုအားလုံးထိုကဲ့သို့သောသတိပေးချက်များတုံ့ပြန်လိမ့်မည်, အချိုးဖောက်ပစ္စည်းကိုမဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်ပစ္စည်းကိုမှအားလုံးလင့်များကို disable လုပ်ဖို့လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်သင့်လျော်သောအဖြစ်အပါအဝင်. အကယ်. မှ Coronation ကာစီနိုမှဧည့်သည်ရဲ့ access ကိုရပ်ဆိုင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပွုမညျ, သင့်လျော်သောအခြေအနေများအောက်တွင်, ထိုဧည့်သည်တစ်ဦးကိုမူပိုင်ခွင့်များထပ်တလဲလဲချိုးဖောက်သို့မဟုတ်မှ Coronation ကာစီနိုသို့မဟုတ်အခြားသူများရဲ့အခြားအသိပညာဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများဖြစ်ဆုံးဖြတ်. ထိုကဲ့သို့သောရပ်စဲ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, မှ Coronation ကာစီနိုယခင်ကမှ Coronation ကာစီနိုမှပေးဆောင်မည်သည့်ပမာဏသာ၏တစ်ဦးငွေပြန်အမ်းပေးရန်မတာဝန်ရှိသည်လိမ့်မယ်.
ဥာဏ်ပညာဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးထားသောအရာ. ဒီသဘောတူညီချက်သင်တို့အားမှ Coronation ကာစီနိုကနေမဆိုမှ Coronation ကာစီနိုသို့မဟုတ်တတိယပါတီဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလွှဲပြောင်းမပေးပါဘူး, လူအပေါင်းတို့သည်လက်ျာ, ထိုကဲ့သို့သောအိမ်ခြံမြေနှင့်ရန်ခေါင်းစဉ်နဲ့အကျိုးစီးပွားတည်နေကြလိမ့်မည် (ထိုပါတီများအကြားအဖြစ်) တစ်ခုတည်းကိုသာမှ Coronation ကာစီနိုနှင့်အတူ. မှ Coronation ကာစီနို, coronationcasino.com, အ coronationcasino.com လိုဂို, လူအပေါင်းတို့သည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်, ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ, coronationcasino.com နှင့် ဆက်စပ်. မှာအသုံးပြုတဲ့ဂရပ်ဖစ်နှင့်လိုဂို, ဒါမှမဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်မှ Coronation ကာစီနိုသို့မဟုတ်မှ Coronation ကာစီနိုဖွင့်လိုင်စင်ခွင့်ပြု၏မှတ်ပုံတင်ထားအမှတ်တံဆိပ်များမှာ. အခြားအမှတ်တံဆိပ်, ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ, ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ဆက်စပ်. မှာအသုံးပြုတဲ့ဂရပ်ဖစ်နှင့်လိုဂိုအခြားတတိယပါတီအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ. ဝက်ဘ်ဆိုက်၏သင့်ရဲ့အသုံးသင်သည်မျိုးပွားသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဆိုမှ Coronation ကာစီနိုသို့မဟုတ် Third-party အမှတ်တံဆိပ်ကိုသုံးခွင့်မရှိသောသို့မဟုတ်လိုင်စင်ပေးအပ်.
ကြော်ငြာတွေ. သင်တစ်ဦးကြော်ငြာ-အခမဲ့အကောင့်ဝယ်ယူကြပြီမဟုတ်လျှင်မှ Coronation ကာစီနိုသည်သင်၏ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာကြော်ငြာဖော်ပြရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်.
အရည်အချင်း. မှ Coronation ကာစီနို coronationcasino.com မှာထိုကဲ့သို့သောဘလော့ '' အဖြစ်ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုလင့်များဖော်ပြရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်,'' ဆောင်ပုဒ်စာရေးဆရာ, သင့်ရဲ့ Blog ကို footer သို့မဟုတ် toolbar ကိုနှင့် font ကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု.
မိတ်ဖက်ထုတ်ကုန်များ. တစ်ဖက်ထုတ်ကုန်ကိုသက်ဝင်ခြင်းအားဖြင့် (e.g. အကွောငျး) ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏တဦးတည်းကနေ, သငျသညျဝန်ဆောင်မှု၏မိတ်ဖက်ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုသဘောတူ. သငျသညျက de-ကိုသက်ဝင်၏မိတ်ဖက်ထုတ်ကုန်များကမည်သည့်အချိန်တွင်ဝန်ဆောင်မှုသူတို့ရဲ့အသုံးအနှုန်းများထဲကရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်.
ဒိုမိန်းအမည်များ. သင်တစ်ဦး domain name ကိုမှတ်ပုံတင်နေတယ်ဆိုရင်, ယခင်ကမှတ်ပုံတင်ထားသော domain name ကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်း, သငျသညျအသိအမှတျပွုနှင့် domain name ကိုအသုံးပြုခြင်းလည်း Assigned အမည်များနှင့်နံပါတ်များသည်အအင်တာနက်ကိုကော်ပိုရေးရှင်း၏မူဝါဒများဘာသာရပ်ကြောင်းသဘောတူ (& quote; ICANN & quotes,), သူတို့ရဲ့အပါအဝင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များ.
အပြောင်းအလဲများ. မှ Coronation ကာစီနိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်, သူ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိမှာ, ဒီသဘောတူညီချက်မဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်အစားထိုး. ဒါဟာအပြောင်းအလဲများများအတွက်အခါအားလျော်စွာဒီသဘောတူညီချက်စစ်ဆေးရန်သင်၏တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်. ဒီသဘောတူညီချက်မှမဆိုအပြောင်းအလဲများ၏ပို့စ်ကိုအောက်ပါသင့်ရဲ့ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းဒါမှမဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဝင်ရောက်ခွင့်သူတို့အားအပြောင်းအလဲများလက်ခံမှုဖွဲ့စည်း. မှ Coronation ကာစီနိုလည်း may, အနာဂတ်မှာ, ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်အသစ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ် features တွေဆက်ကပ် (အပါအဝင်, အသစ်ကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုလွှတ်ပေးရန်). ထိုကဲ့သို့သော features အသစ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဒီသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေားမှဘာသာရပ်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်.
အဆုံး. မှ Coronation ကာစီနိုကိုအချိန်မရွေးဝက်ဘ်ဆိုက်၏အားလုံးသို့မဟုတ်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမှသင့်ရဲ့ access ကိုရပ်ဆိုင်းစေခြင်းငှါ, အတူသို့မဟုတ်အကြောင်းမရှိဘဲ, အတူသို့မဟုတ်အသိပေးစာမပါဘဲ, ချက်ချင်းထိရောက်သော. သင်ဤသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်သင့် coronationcasino.com အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းလိုလျှင် (သငျသညျတစျဦးရှိပါက), သငျသညျရိုးရှင်းစွာဝက်ဘ်ဆိုက် အသုံးပြု. ကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းစေခြင်းငှါ. အထက်ပါသို့ရာတွင်, သင်တစ်ဦးပေးဆောင်န်ဆောင်မှုအကောင့်ရှိပါက, သငျသညျရုပျပစ်စညျးဒီသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်သုံးဆယ်အတွင်းထိုကဲ့သို့သောပြိုပျက်ရာကိုပျောက်ကင်းစေရန်ပျက်ကွက်လျှင်ထိုကဲ့သို့သောအကောင့်သာမှ Coronation ကာစီနိုအားဖြင့်ရပ်ဆိုင်းရနိုင် (30) မှ Coronation ကာစီနိုရဲ့အသိပေးစာထံမှသင်တို့ သိ. ရက်; ကထောက်ပံ့, မှ Coronation ကာစီနိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဆင်းအထွေထွေပိတျ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ချက်ချင်းဝဘ်ဆိုဒ်ကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်. သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝအားဖြင့်ရပ်စဲရှင်သန်သင့်တယ်သောဤသဘောတူညီချက်၏အားလုံးပါပြဋ္ဌာန်းချက်များရပ်စဲရှင်သန်ရကြလိမ့်မည်, အပါအဝင်, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ပိုင်ဆိုင်မှုပြဋ္ဌာန်းချက်, အာမခံအကြောင်းသတိပြုစရာများ, တာဝန်ယူမှု၏လျော်ကြေးနှင့်ကန့်သတ်.
အာမခံ၏ခွင. အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ထောက်ပံ့ & quote လျက်ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ် & quote သကဲ့သို့,. မှ Coronation ကာစီနိုနှင့်၎င်း၏ပေးသွင်းခြင်းနှင့်လိုင်စင်ခွင့်ပြုဤဥပဒေဖြင့်မဆိုမျိုးလုံးကိုအာမခံ Disclaimer, ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသို့မဟုတ်ဆိုလို, အပါအဝင်, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ကုန်သည်တို့သည်အာမခံ, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် Non-ချိုးဖောက်မှုများအတွက်ကြံ့ခိုင်ရေး. မှ Coronation ကာစီနိုမဟုတ်၎င်း၏ပေးသွင်းခြင်းနှင့်လိုင်စင်ခွင့်ပြုမတည်မ, ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်အမှားအခမဲ့သို့မဟုတ်အသုံးပြုခွင့်ရမညျဖွစျလိမျ့မညျမဆိုအာမခံစဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်မပြတ်မတောက်ရလိမ့်မည်စေသည်. သင်ကနေ download လုပ်ပါကနားလည်, သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်တဆင့်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူရန်, သင့်ကိုယ်ပိုင်သမ္မာသတိနှင့်အန္တရာယ်မှာအကျဘျဆိုကျ.
တာဝန်ဝတ္တရား၏န့်အသတ်. အဘယ်သူမျှမအဖြစ်အပျက်လိမ့်မည်မှ Coronation ကာစီနိုခုနှစ်တွင်, သို့မဟုတ်ယင်း၏ပေးသွင်းသို့မဟုတ်လိုင်စင်ခွင့်ပြု, မည်သည့်စာချုပ်အောက်မှာဒီသဘောတူညီချက်မဆိုဘာသာရပ်ကိစ္စမှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူထိုက်ဖြစ်, ဂရုမစိုက်ခြင်း, အဘို့အတင်းကြပ်တာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်အခြားဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်သာတူညီမျှသီအိုရီ: (ကိုယ့်) မဆိုအထူး, ဖွစျပှားသို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု; (ii) အစားထိုးထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဝယ်ယူရေး၏ကုန်ကျစရိတ်; (iii) ဒေတာအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများပြတ်တောက်ဘို့; သို့မဟုတ် (ဃ) တကျိပ်နှစ်ပါးသောကာလအတွင်းဒီသဘောတူညီချက်အောက်မှာမှ Coronation ကာစီနိုရန်သင့်အားဖြင့်ပေးဆောင်ထိုအဖိုးအခထက်ကျော်လွန်ကြောင်းမည်သည့်ပမာဏသာများအတွက် (12) ကြိုတင်လုပ်ဆောင်ချက်၏အကြောင်းရင်းအားလကာလ. မှ Coronation ကာစီနိုများကြောင့်သူတို့ရဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ထိန်းချုပ်မှုထက်ကျော်လွန်ကိစ္စရပ်များဆိုရှုံးနိမ်သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးစရာတာဝန်ယူမှုရှိရကြမည်. အဆိုပါအထက်ပါသက်ဆိုင်သောဥပဒေဖြင့်တားမြစ်ထားသောအအတိုင်းအတာလျှောက်ထားရမည်မဟုတ်.
အထွေထွေကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အာမခံ. သငျသညျကကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ခိုင်လုံ (ကိုယ့်) ဝက်ဘ်ဆိုက်၏သင့်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းမှ Coronation ကာစီနိုသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့်အတူတင်းကျပ်အညီဖြစ်ရလိမ့်မည်, ဒီသဘောတူညီချက်နှင့်အတူအပေါင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ (သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်မည်သည့်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း limitation မရှိဘဲအပါအဝင်, ပြည်နယ်, မြို့, သို့မဟုတ်အခြားအစိုးရမဟုတ်သောဧရိယာ, အွန်လိုင်းကငျြ့ကိုနှစ်သက်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်., နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်သင်နေထိုင်သည့်အတွက်တိုင်းပြည်ကနေ export နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ကူးစက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးသက်ဆိုင်သောဥပဒေများအပါအဝင်) နှင့် (ii) အကျဘျဆိုကျသင့်ရဲ့အသုံးမဆိုတတိယပါတီများ၏အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်သို့မဟုတ် misappropriate မည်မဟုတ်.
Indemnification. သငျသညျအန္တရာယ်မှ Coronation ကာစီနိုအလိုက်ပေးလျော်ခြင်းများနှင့်ကျင်းပရန်သဘောတူ, ၎င်း၏ကန်ထရိုက်တာများ, နှင့်၎င်း၏လိုင်စင်ခွင့်ပြု, နှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာများ, အရာရှိ, မည်သည့်အပေါင်းတို့နှင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဆန့်ကျင်န်ထမ်းများနှင့်အေးဂျင့်, ရှေ့နေများ '' ကြေးအပါအဝင်, ဝက်ဘ်ဆိုက်၏သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုထဲကပေါ်ထွက်လာသော, ဒီသဘောတူညီချက်၏သင့်ကိုချိုးဖောက်ရန်ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမ.
အမျိုးမျိုးစုပေါင်းသော. ဒီသဘောတူညီချက်မှ Coronation ကာစီနိုများနှင့် hereof ဘာသာရပ်ကိစ္စကိုရည်မှတ်သငျသညျအကြားတစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်ဖွဲ့စည်း, သူတို့ကသာမှ Coronation ကာစီနို၏ခွင့်ပြုချက်အလုပ်အမှုဆောင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးရေးသားထားသောပြင်ဆင်ရေးအားဖြင့်ပြုပြင်ထားသောစေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်ပို့စ်အားဖြင့်တစ်ဦးပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဗားရှင်းမှ Coronation ကာစီနိုအားဖြင့်. အတိုင်းအတာသက်ဆိုင်သောတရား မှလွဲ., ရှိလျှင်, မဟုတ်ရင်ကိုထောက်ပံ့ပေး, ဒီသဘောတူညီချက်, အကျဘျဆိုကျမဆိုဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုအင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်၏ဥပဒေများဖြင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်, ပညတ်တရားတော်ကိုပြဋ္ဌာန်းချက်၎င်း၏ပဋိပက္ခဖယ်ထုတ်ပြီး, နှင့်ထဲကပေါ်ထွက်လာသောသို့မဟုတ်တူညီသောမဆိုနှင့်စပ်လျဉ်းဆိုအငြင်းပွားမှုများများအတွက်သင့်လျော်သောကွင်းလန်ဒန်မြို့တွင်တည်ရှိပြီးပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးများဖွစျလိမျ့မညျ, ဗြိတိန်နိုင်ငံ. ပညာတတ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်. တရားရုံးမိန့်သို့မဟုတ်သာတူညီမျှကယ်ဆယ်ရေးသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများအဘို့အတောင်းဆိုမှုများ မှလွဲ. (တစ်ဦးနှောင်ကြိုး၏ပို့စ်မပါဘဲမည်သည့်အရည်အချင်းဝင်းထဲမှာယူဆောင်စေခြင်းငှါအရာ), ဒီသဘောတူညီချက်အောက်မှာပေါ်ပေါက်မည်သည့်အငြင်းပွားမှုနောက်ဆုံးတွင်တရားရေးဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ခြင်းနှင့်ဖြန်ဖြေ of Service ကိုဘက်စုံအနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများနှင့်အညီအခြေချခံရကြလိမ့်မည်, Inc မှ. (& quote; ကြောပိတ်ဆို့မှု & quotes,) ထိုကဲ့သို့သောစည်းကမ်းများနှင့်အညီခန့်အပ်ထားသောသုံးခုံသမာဓိလူကြီးများက. အဆိုပါခုံသမာဓိလန်ဒန်မြို့ဗြိတိန်တွင်သောအရပ်တို့ကိုယူရမည်, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့်ခုံသမာဓိဆုံးဖြတ်ချက်မဆိုတရားရုံးထဲမှာပြဌာန်းစေခြင်းငှါ. ဒီသဘောတူညီချက်ပြဋ္ဌာန်းရန်မဆိုအရေးယူသို့မဟုတ်ရှေ့ဆက်အတွက်ရေပန်းစားနေသောပါတီစရိတ်နှင့်ရှေ့နေများ '' အဖိုးအခခွင့်ရကြလိမ့်မည်. ဒီသဘောတူညီချက်မဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမမှန်ကန်ပါသို့မဟုတ်ရနိုင်ကြောင်းကျင်းပလျှင်, ကအစိတ်အပိုင်းပါတီများ '' မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်လိမ့်မည်, နှင့်ကျန်ရှိသောဝေမျှပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု၌တည်နေပါလိမ့်မယ်. ဒီသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ် သိ. ဆိုပြိုပျက်ရာမဆိုသက်တမ်းသို့မဟုတ်အခြေအနေတစ်ခုခုပါတီအားဖြင့်တစ်ဦးပယ်ဖျက်ပေးခြင်း, တစုံတယောက်သောသူသည်ဥပမာအားဖြင့်ရှိ, ထိုကဲ့သို့သောသက်တမ်းသို့မဟုတ်ခွအေနအေသို့မဟုတ် သိ. ဆိုနောက်ဆက်တွဲဖောက်ဖျက်ရှိသောကြွေးမြီများကိုတင်ပြရန်မည်မဟုတ်. သငျသညျမှသဘောတူညီမှုမဆိုပါတီရန်ဤသဘောတူညီချက်အောက်မှာသင့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကို assign စေခြင်းငှါ, နှင့်အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူ, ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခွအေန; မှ Coronation ကာစီနိုခွအေနအေမရှိဘဲဤသဘောတူညီချက်အောက်မှာက၎င်း၏လူ့အခွင့်အရေး assign စေခြင်းငှါ. ဒီသဘောတူညီချက်အပျေါမှာခညျြနှောပါလိမ့်မည်နှင့်ပါတီများ၏အကျိုးကျေးဇူးမှ inure လိမ့်မည်, သူတို့ရဲ့ဆက်ခံခြင်းနှင့်ခွင့်ပြု assign.
မှ Coronation ကာစီနို - GlobaliGaming ("မှ Coronation ကာစီနို& quotes,) coronationcasino.com လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များလုပ်ကိုင်စေခြင်းငှါ. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ operating စဉ်ဒါဟာကျနော်တို့စုဆောင်းစေခြင်းငှါမဆိုသတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ privacy ကိုလေးစားလိုက်နာဖို့မှ Coronation ကာစီနို၏မူဝါဒသည်.
အများဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်အော်ပရေတာလိုပဲ, မှ Coronation ကာစီနိုကို web browser များနှင့်ဆာဗာပုံမှန်အားဖြင့်မရရှိနိုင်ပါစေသောမျိုးမဟုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း, ထိုကဲ့သို့သော browser ကိုအမျိုးအစားအဖြစ်, ဘာသာစကား preference ကို, ရည်ညွှန်းဆိုက်, အသီးအသီးဧည့်တောင်းဆိုမှုကို၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်. Non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းအတွက်မှ Coronation ကာစီနိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပိုကောင်းမှ Coronation ကာစီနိုဖွင့်ဧည့်သည်များကသူ့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာကိုသုံးပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်ပါသည်. အခြိနျမှနျမှ, မှ Coronation ကာစီနိုကိုစုစုပေါင်းတွင် non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ချိခြင်းငှါ, ဥပမာ,, ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာထုတ်ဝြေခင်းအားဖြင့်.
မှ Coronation ကာစီနိုလည်းအင်တာနက်ပရိုတိုကောများကဲ့သို့အလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း (အိုင်ပီ) အသုံးပြုသူများသည်အတွက် logged အဘို့နှင့် coronationcasino.com ဘလော့ဂ်များ / ဆိုဒ်များတွင်မှတ်ချက်များထွက်ခွာအသုံးပြုသူများအတွက်လိပ်စာများ. မှ Coronation ကာစီနိုကိုသာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်တွေ့ရမှာပါသောတူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင်သုံးစွဲသူနဲ့မှတ်ချက်ပေးသူက IP လိပ်စာများအတွက် logged တွေ့ရမှာပါ, ကမှတ်ချက်ပေးသူက IP လိပ်စာများနှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများ မှလွဲ. မြင်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မှတ်ချက်ကျန်ရစ်ခဲ့သည့်နေရာတွင်ဘလော့ဂ် / site ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှထုတ်ဖော်.
မှ Coronation ကာစီနိုဖွင့်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှအချို့သောဧည့်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်မှ Coronation ကာစီနိုလိုအပ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာမှ Coronation ကာစီနိုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့ရှေးခယျြ. မှ Coronation ကာစီနိုတို့ကိုစုဝေးစေသတင်းအချက်အလက်များ၏ပမာဏနှင့်အမျိုးအစားအပြန်အလှန်၏သဘောသဘာဝအပေါ်မူတည်. ဥပမာ, ကျွန်တော်တို့မှာ sign up ကိုအဘယ်သူသည်ဧည့်သည်များမေးမြန်း coronationcasino.com တစ်ဦး username နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများကို. မှ Coronation ကာစီနိုနှင့်အတူငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာထိတွေ့ဆက်ဆံသူများသည်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးဖို့တောင်းနေကြတယ်, လိုအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်သူတို့အားငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ process ရန်လိုအပ်သည်အဖြစ်အပါအဝင်. အသီးအသီးအမှု၌, မှ Coronation ကာစီနိုမှ Coronation ကာစီနိုတွေနဲ့ဧည့်သည်ရဲ့အပြန်အလှန်၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သောသို့မဟုတ်သင့်လျော်သည်အဖြစ်သာ insofar ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်း. မှ Coronation ကာစီနိုကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်မပါဘူး. ထိုအခါဧည့်သည်အစဉ်အမြဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ဖို့ငြင်းဆန်နိုင်, ဒါကြောင့်အချို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်-related လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသူတို့ကိုကာကွယ်တားဆီးစေခြင်းငှါထိုအသိပေးချက်နှင့်အတူ.
မှ Coronation ကာစီနိုက၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှဧည့်သည်များ၏အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. စာရင်းဇယားများကိုစုဆောင်းစေခြင်းငှါ. မှ Coronation ကာစီနိုလူသိရှင်ကြားဤအချက်အလက်ဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်အခြားသူများအားကပေးစေခြင်းငှါ. သို့သော်, မှ Coronation ကာစီနိုကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်မပါဘူး.
မှ Coronation ကာစီနိုကိုသာ၎င်း၏န်ထမ်းများ၏သူတို့အားအလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များပေးပို့အသိပေး, ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများက (ကိုယ့်) မှ Coronation ကာစီနိုရဲ့ကိုယ်စားပေါ်မှာ process နိုင်ရန်အတွက်အချက်အလက်တွေကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်သို့မဟုတ်မှ Coronation ကာစီနိုရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာရရှိနိုင်န်ဆောင်မှုပေး, နှင့် (ii) အခြားသူများကထုတ်ဖော်ရန်မသဘောတူညီခဲ့ကြပြီ. သူတို့အားန်ထမ်းအချို့သည်, ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများသင့်အိမ်တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာတည်ရှိပါတယ်စေခြင်းငှါ; မှ Coronation ကာစီနိုရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု., သငျသညျထိုသူတို့အားထိုကဲ့သို့သတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်းဖို့သဘောတူ. မှ Coronation ကာစီနိုမည်သူမဆိုဖို့အလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဆုတ်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်မည်မဟုတ်. သူ့ရဲ့န်ထမ်းဖို့ထက်အခြား, ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ, အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့, မှ Coronation ကာစီနိုကသာဆင့်ခေါ်စာမှတုန့်ပြန်အလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များပေးပို့အသိပေး, တရားရုံးအမိန့်များသို့မဟုတ်အခြားအစိုးရမဟုတ်သောတောင်းဆိုချက်, သို့မဟုတ်မှ Coronation ကာစီနိုထုတ်ဖော်မှ Coronation ကာစီနို၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လည်းဖြစ်နိုင်သလိုလိုအပ်သောကြောင်းကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုယုံကြည်သောအခါ,, တတိယပါတီများသို့မဟုတ်ကြီးမားသောမှာအများပြည်သူ. သင်တစ်ဦးမှ Coronation ကာစီနိုဝက်ဘ်ဆိုက်၏မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူတွေဟာသင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာထောက်ပံ့ကြလျှင်, မှ Coronation ကာစီနိုရံဖန်ရံခါ features အသစ်အကြောင်းကိုသင်ပြောပြရန်သင့်အားအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့စေခြင်းငှါ, သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုမြှူဆွယ်တောင်းခံ, သို့မဟုတ်ပဲမှ Coronation ကာစီနိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်အတူသွားမယ့်အရာနှငျ့နေ့စွဲရန်သင့်အားဖွင့်စောင့်ရှောက်. သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုတောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့လိုလျှင် (အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများတဦးမှတဆင့်ဥပမာ), ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းလင်းရန်သို့မဟုတ်သင့်တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်ကူညီဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအခြားအသုံးပြုသူများကိုထောကျပံ့ကူညီနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ထုတ်ဝေခွင့်ကျနော်တို့ချန်ထားသော. မှ Coronation ကာစီနိုကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်သလိုလိုအပ်သောအားလုံးအစီအမံကြာ, အသုံး, အလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲတချို့သို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်း.
တစ်ဦးက cookie ကိုတစ်ဦးဧည့်သည်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ website တစ်ခုစတိုးဆိုင်များအချက်အလက်တွေကိုတစ်ဦး string ကိုဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ဧည့်သည်ရဲ့ဘရောက်ဇာကိုအသီးအသီးအချိန်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဧည့်သည်ပြန်ထောက်ပံ့ပေးကြောင်း. မှ Coronation ကာစီနိုမှ Coronation ကာစီနိုဧည့်သည်များဖော်ထုတ်ခြေရာခံကိုကူညီ cookies များကိုအသုံးပြုသည်, မှ Coronation ကာစီနိုဝက်ဘ်ဆိုက်၏သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှု, နှင့်၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် access ကိုဦးစားပေး. သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် cookies တွေကိုရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူးသောသူမှ Coronation ကာစီနိုဧည့်သည်များမှ Coronation ကာစီနိုရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. မီက cookies တွေကိုငြင်းဆန်ဖို့သူတို့ရဲ့ browser များသတ်မှတ်ထားသင့်တယ်, မှ Coronation ကာစီနိုဖွင့်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအခြို့ features တွေ cookies တွေကို၏အကူအညီမပါဘဲစနစ်တကျလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမပြုစေခြင်းငှါအအားနည်းချက်နှင့်အတူ.
မှ Coronation ကာစီနိုလိုလျှင်, သို့မဟုတ်သိသိသာသာအားလုံး၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှု, ဝယ်ယူခဲ့, သို့မဟုတ်မှ Coronation ကာစီနိုလုပ်ငန်းထွက်ဝင်သို့မဟုတ်ဒေဝါလီဝင်သောမဖြစ်နိုင်အဖြစ်အပျက်အတွက်, အသုံးပြုသူသတင်းအချက်အလက်တတိယပါတီအားဖြင့်လွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတဦးဖြစ်လိမ့်မယ်. သငျသညျထိုကဲ့သို့သောလွှဲပြောင်းပေါ်ပေါက်စေမည်အကြောင်းဝန်ခံ, နှင့်ဤမူဝါဒထွက်သတ်မှတ်ထားအဖြစ်မှ Coronation ကာစီနိုမဆိုရယူသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကိုသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ရှိစေခြင်းငှါ.
မှ Coronation ကာစီနိုဧကရာဇ်၏မည်သည့်အထူးသဖြင့်အစုံနှင့်အတူဆက်နွယ်သည်မဟုတ်. အမှ Coronation ကာစီနိုမှာပျော်စရာရှိသည်!
randy.hallcasino @ အလားအလာ dot com